Musharaxiinta Mucaaradka oo Jubbaland iyo Puntland ugu baaqay inay bedelaan Guddiyada Doorashooyinka | Dhacdo
Musharaxiinta Mucaaradka oo Jubbaland iyo Puntland ugu baaqay inay bedelaan Guddiyada Doorashooyinka
Musharaxiinta mucaaradka ee u taagan jegada madaxtinimada ee dalka ayaa Madaxweyne-yaasha Puntland iyo Jubbaland ugu baaqay inay dib u eegis ku sameeyaan, isla-markaana ay bedelaan xubnaha ku metalaya Guddiyada Doorashooyinka.
War ay soo saareen ayay ku sheegeen in baaritaano ay sameeyeen inay ku ogaadaan in xubnaha ay soo gudbiyeen labadaasi maamul ay ku jiraan xubno aan buuxin shuruudihii loogu talagalay. Warka ayaa lagu sheegay in xubnahaasi ay ka tirsan yihiin shaqaalaha rayidka ee labada maamul, iyagoona codsaday in la bedelo.
Musharaxiinta mucaaradka ayaa markale ku baaqay in magacaabista Guddiyada Doorashooyinka la waafajiyo heshiisyadii siyaasadeed ee horey loo gaaray, dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka u degsan.
Warkan ayaa waxaa soo saaray afar iyo toban musharax, kuwaa oo qaarkood horey dalka uga soo noqday Madaxweyne-yaal, Ra’iisal Wasaare, Ra’iisal Wasaare Kuxigeen iyo Wasiiro.